ODUU Ammee: Gaazexeessituu Masarat Dhaabaa ganama har’aa mana jireenya isheeti tika mootummaatiin qabamuu Abbaan Warraa ishee OMN-tti hime. – Kichuu
ODUU Ammee: Gaazexeessituu Masarat Dhaabaa ganama har’aa mana jireenya isheeti tika mootummaatiin qabamuu Abbaan Warraa ishee OMN-tti hime.
Gaazexeessituu Masarat Dhaabaa ganama har’aa mana jireenya isheeti tika mootummaatiin qabamuu Abbaan Warraa ishee OMN-tti hime.
Amajji 19. 2013 dhaddacha himatamtoota Galmee Obbo Jawaar Mohammad jalatti argamanii hordofuuf namoota uffata Keelloo sababa uffatanii dhaqaniif hidhamanii turan keessaa tokko kan taate, Gaazexeessituu Masarat Dhaabaa namoota kan biroo waliin hidhamte wajjin mana murtiitti dhihaattee wabii qarshii qarshii 700tiin hiikamuun ishee ni yaadatama.
Ergasii as Gaazexeessituu Masarat Dhaabaa nagumaan maatiifi ijoollee ishee waliin jiraachaa akka turte kan himu Abbaan warraa isii, ganama guyyaa har’aa jechuunis Gurraandhala 3, 2013 tika mootummaa uffata siivilii uffataniin mana jireenyasiitii keessaa qabamuu dubbata.
“Ganamaan mooraa nuti kireeffannee gallu humnaan bansiisanii ega seenanii booda, mana keenya rurrukutan. Balabballi akkuma banameen hayyama tokko malee, akka nama Shiftaa qabutti meeshaa diddiriirfatanii mana keessaa bakka bakka qabatan. Ijoolleefi hojjettuun manaa baayyee rifatanii turanis, battala sana maal akka ta’aa jiru yoo gaafannu, Masarat akka barbaadamtu nutti himanii, anaafi ishee fuudhanii deeman,kan jedhu Abbaan warraa isii kun, Masarat Dhaabaa ajaja mana murtii akka qabamtuuf isiitti ba’e isaan gaafattus, deebii addaa akka hin argatin hima.
Gaazexeessituu Masarat Dhaabaa, dhaabbata dhuunfaa beeksisaafi miidiyaa Siinan jedhamu kan qabdu yoo ta’u, waltajjiillee gurguddaa garaagaraa geggeessuun beekamti.
Masarat Dhaabaa yeroo ammaa kana Finfinnee Naannoo Haayahuletti jedhamuun beekamutti kan argamu Buufata poolisii karramaarraa jedhamutti hidhamtee jiraachuusii kan himu, Abbaan warraa isii kun, erga achi dhaqqabanii yeroo isa biraa hiikanitti, maalif akka isii qaban waajjira poolisii sana gaafatee deebiin inni argate Kan isii qabsiise koomishinii poolisii Oromiyaa ta’uufi sichi akka isii fudhatan dhaga’uusaa dubbata.
Sababa qabamuu haadha warraa isaa gaafatamee deebii inni OMN-iif kennes,
“Haati warraa kiyya, hidhamtoota siyaasaa Oromoof sagalee taate malee, balleessaa raawwatte hin qabdu. Hidhamtoota siyaasaa warra duraan hidhame nuuf hiikaa osoo jennuu, kan biraa itti dabaluun furmaata waarawaa fiduu hin danda’u.” jechuun himee, uummatni Oromoo salphina mana dhuunfaa dhuunfaa keenyaatti adeemaa jiru jalaa ooluuf, tokkummaan falmachuu qaba jechuun dhaamsa dabarfatee jira.